माओवादी केन्द्रको महासचिव हुनेगरि विप्लवसँग अन्तिम सहमति ! - Compaq News
माओवादी केन्द्रको महासचिव हुनेगरि विप्लवसँग अन्तिम सहमति !
अन्तत: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र विप्लव एकै पार्टीमा देखिने भएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच एकता हुने पक्का भएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा कृष्णबहादुर महरा र विप्लवबीच भएको विभिन्न छलफल सकारात्मक भएको बुझिएको छ। विप्लवलाई माओवादी केन्द्रमा समेटर र महासचिव बनाउने महराको प्रस्तावमा उनी सकारात्मक देखिएका हुन्। प्रचण्डले नेकपाका महासचिव विप्लवसँग नजिक रहेका महरालाई छलफल अघि बढाएर छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रचण्डले यसअघि पनि आफ्ना थुप्रै कार्यक्रमहरुमा माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा उभिन पहल गरिरहेको बताउदै आएकोमा विप्लवसँग भने वार्तानै गरेर छिटै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरेको पाइएको छ।
विप्लवले पनि जनाताका पक्षमा काम गर्नु पर्ने सर्त सहित माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न सकिने बताउदै आएका छन्। विप्लवले केहि समय अघि पार्टीको एक कार्यक्रमबाट कुनै पनि जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टीसँग आफू पार्टी एकता गरेर अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै त्यसप्रति संकेत गरेका थिए।
यसबीच विप्लव माओवादी केन्द्रमा समेटिने हुँदा हालै चर्चामा आएको एमसीसी माओवादीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नगर्ने बुझिएको छ। यस विषयमा ठोस धारणा तय नगरेका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी फिर्ता लान समेत संकेत गरेका छन्। उनले अमेरिका बाट आएका कुनैपनि नेतालाई आफ्नो स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका छैनन्।
नेकपाका प्रवक्त खड्क बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले पार्टी एकता गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्ने भन्दै केहि समय लाग्ने बताएपछि एकता प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको पनि बुझिएको छ।